Fakana ny vatsim-pianarana: hivoaka ny 21 jona ny carte Visa | NewsMada
Nitondra fanazavana mikasika ny vatsim-pianaran’ny mpianatra eny amin’ny oniversite ny minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika, i Assoumacou Elia Béatrice. Fantatra tamin’izany fa hivoaka ny 21 jona izao ny carte Visa ahafahan’ny mpianatra mandray vatsim-pianarana.
Hisantatra izany ny mpianatra miisa 35 000 ao amin’ny oniversiten’Antananarivo. 25 ireo milina ampiasaina mamokatra ireo carte Visa. Ho an’ny oniversite hafa, efa misitraka ny vatsim-pianarana fahadimy volana avokoa izy ireo. Efa an-dalam-pikirakirana ny tetiandro ny tompon’andraikitra ho an’ny oniversite sasany.
Ny Paositra malagasy nomerika no mikarakara ny carte Visa. Misahana ny fanaraha-maso ny mombamomba ny mpianatra kosa ny minisitera mba tsy hisy diso. Hisitraka ny vatsim-pianarana avokoa ireo nahavita ny “digitalisation” rehetra, raha ny fanazavana nentin’ny minisitra.
Ho an’ny oniversite sasantsasany an-dalam-pamaranana ny taom-pianarana, hatao ny hivoahan’ny vatsim-pianarana mialoha ny fiafaran’ny taom-pianarana.
Nomarihin’ny minisitra fa nahafahana nahita ny olona miasa sady mpianatra ary koa mandray karama sy mandray vatsim-pianarana ny fanaovana ny “digitalisation”. Misy tsy mpianatra akory kanefa mandray vatsim-pianarana. Mivoaka ny isan’ireo tena mpianatra eny amin’ny oniversite sy mendrika tokoa homena vatsim-pianarana.